Home Wararka Muxuu salka ku haya kulanka Farmajo, Abiye Axmed & Afawerki?
Muxuu salka ku haya kulanka Farmajo, Abiye Axmed & Afawerki?
Waxaa lagu wada in toddobaadkan ay magaala Casmara ku kulmaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, RW Itoobiya Abiye Axmed iyo Madaxweynaha martida loo yahay ee Eriteriya Asiah Afawerki.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay aya MOL u sheegay in uu kulanka codsaday MW Farmaajo waxaana lagu lafa guri doonaa arrimaha doorashooyinka lagu wado in ay Soomaaliya ka dhacdo bisha Febraayo 2021.
Codsiga iyo ujeedka shirka oo aanan helin aya waxaa la saadaalinayaa in MW Farmaajo uu rabo in magaalada Muqdisho la keeno ciidamo ka socda Eriteriya iyo Itoobiya bartamaha sanadka 2020.
Ciidankan ayaa la rabaa in si awood ah ay u sugaan amniga magaalada Muqdisho taasoo MW Farmaajo uu rabo in afduubo doorashada 2021 si uu mar kale dib loogu soo dooran lahaa.
Wadamada beesha caalamka ay bilaabay cadaadis la saaray MW Farmaajo in uu si degdeg ah u ogolaado sharciga doorashooyinka isla markaana uu la heshiiyo maamul goboleedyada. Beesha caalamka ayaa ka biyo diiday in MW Farmaajo la siiyo muddo kororsi laba sano ah si uu dalka ugu diyaariyo doorasha, waana midda keentay in uu codsado shir degdeg ah oo dhex mara seddexda masuul.